Ryerson University - Study in Canada. Education Magazine Akude
Ryerson University Iinkcukacha
isixeko : Toronto
Zifumaneke : 1948
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa University Ryerson
Ukubhalisa kwiYunivesithi Ryerson
Ryerson iYunivesithi inkokeli Canada xa ezintsha, imfundo omsebenzi-zijolise kunye neyunivesithi ngokucacileyo etyhalela. Yinto eyunivesithi ngokucacileyo ezidolophini kujoliswe ezintsha noshishino. Ryerson unalo lubizo ukukhonza imfuneko zezentlalo kunye nokuzibophelela ixesha elide-umi ukuba bazibandakanye noluntu.
Bakhokelwa isiCwangciso ngqindilili Academic, iajenda yophando namabhongo, nesiCwangciso Master sokuvuselela kwikhampasi kunye nukuBeka ezingqongileyo, Ryerson ngoyena isicelo ukuya eyunivesithi Ontario kuthelekiswa izithuba ezikhoyo, kwaye udumo lwayo neenkokheli loshishino noluntu lisenyuka.
Ryerson inikeza ngaphezu 100 Iinkqubo zesidanga kunye abanezidanga. Nkcubeko nebandakanyayo, iyunivesiti ilikhaya 38,950 abafundi, okubalwa 2,300 abafundi inkosi kunye PhD, phantse 2,700 fakalti kunye nabasebenzi, and more than 170,000 nabaladeli lonke. Uphando Ryerson na kwi indlela yempumelelo kunye nokukhula: ngaphandle uphando ngemali sele kabini kule minyaka mine idlulileyo. The G. Raymond Chang School of Ukuqhubeka Imfundo umboneleli phambili Canada ngayo kwimfundo yaseyunivesithi-esekelwe omdala. ekujoliswe yeYunivesithi sunguleni noshishino imelwe kakhulu ngokucacileyo yi-Digital Media Zone, indawo abafundi basebenzisane uze iingcamango zabo digital kwindawo yentengiso.
Ryerson ivuselela core zibase of Toronto kunye izakhiwo ezintathu ezintsha: le Mattamy Centre Athletic kwi-Gardens, le Ryerson Image Centre entliziyweni kwikhampasi, kunye Student Learning Centre Yonge Street. Ukwengeza, isaqhubekayo kukuveliswa kwisakhiwo esitsha emininzi, uphuhliso Church Street (CSD). Esi sakhiwo sitsha siza kuqhutyelwa nje emantla Dundas on Church Street kwaye iya kuba likhaya iinkqubo ezine kwiinkonzo zempilo zemfundo, Ry
The Ted Rogers School of Management (TRSM) sisikolo ishishini elamkelweyo nguMbutho Advance giate Schools of Business(AACSB). Kwi Bay Street kufuphi kwisithili yemali Toronto ngayo, le TRSM inika iinkqubo ezahlukeneyo ezahlukeneyo iinkalo zoshishino. Iprogram school houses Canada ngayo ulawulo zesidanga inkulu, kunye neenkqubo ezininzi izidanga. Wesikolo Bachelor isidanga of Commerce (BComm) iinkqubo neyohlulwe:
ububele & Management Tourism
The Ted Rogers School of Management yinkokheli eyaziwayo kwimfundo amashishini eKhanada kwizindlu Lwenkqubo Entrepreneurship University Ryerson, omnye kweenkqubo zoshishino likhulu Canada.
izifundo Graduate luqulathe iMBA kugxininiswa zehlabathi, kunye iMBA kwi Management of Technology kunye Innovation. Isikolo ikwanikezela Master of Science Management (mS) kwi Management of Technology kunye Innovation.
Izinga ukwamkeleka Ted Rogers School lwenkqubo MBA Management alunto 25%, owesibini lisezantsi 39 iinkqubo MBA waseKhanada ibekwa Financial Post ngoMatshi 2012.
Kwi 2009-2010 kunyaka wezifundo, Ryerson wazisa njengezifundo emibini emitsha kwinkqubo yoLawulo loShishino: uMthetho & Business, kwaye Studies Management Global. I-Global Management Studies inkulu ezihlangwini woLawulo ezinkulu, yokugqibela enikelweyo kwi 2010-2011.
elishweni 2013, Ted Rogers School of Management yasungula School entsha Accounting and Finance. Accounting and Finance njengezifundo ezi kuphela ezifundiswa ngokusebenzisa School of Accounting and Finance kwaye saba ayinakuphunyezwa ngenkqubo Business Management.
Iinkqubo zoshishino ngaphambili bahlal kwi campus kwi “Building Business”, yafudukela kuso amatsha emva $15 lesigidi ukusuka Ted Rogers. Isikolo zikwindawo iphiko olutsha Toronto Eaton Centre kwi-mpuma Bay kunye Dundas Streets. Isikolo ohlala imigangatho emithathu iphiko emgangathweni-ezisithoba (imigangatho ezimbini kuyo imisebenzi ngemiyinge, kunye iigaraji ngasentla-grade yokupaka bebehlala eziseleyo imigangatho emithathu). Ukuhlanganiswa eyunivesithi Ryerson kunye neyoshishino kwisakhiwo inye banconywa njengesona sisombululo ezintsha ukuze eyunivesithi zibase.
Isikolo esasiwufumene notoriety yesizwe xa omnye iingcali zalo (james Norrie) wamgxeka ndimlahlele ye Dragons’ Elukhozweni ngexesha thethwano lokugqibela inqanaba kwinowuthi yimpumelelo ngabafundi besi sikolo. Makanenzele ekugqibeleni wawa ngenxa yezenzo le njingalwazi. Lo njingalwazi mnye kamva kuziwe ekhampasini wamangalela eyunivesithi.
I-Faculty of Arts iquka lezingluntu elinambini namasebe nangentlalo (njengoko Fall 2016) kwaye lidlala indima emibini ekhethekileyo yunivesithi. Inika yeFakhalthi:
kwiinkqubo kwesidanga, kumanqanaba omabini inkosi kunye zobugqirha, ukuba abe licandelo olomeleleyo yokufunda, uphando, ezintsha kunye nohlalutyo olunzulu;
imfundo ekumgangatho ophezulu yobugcisa-olusekelwe izifundo izifundo silinene olubandakanya zonke iikharityhulam inkqubo isidanga Ryerson ngayo, ukusuka nobuntatheli ukuya zobunjineli ishishini. izifundo Lutho umngeni kubafundi’ ingqondo kunye nentelekelelo, ekukhuliseni nako kwabo ukucinga nzulu kwaye baziqhelanise isantya nokunyuka yotshintsho kwihlabathi lanamhlanje.
ZamaSebe Faculty of Arts
LezoBugcisa Studies Contemporary
Environmental & Urban Uzinzo
iilwimi, noluncwadi, ne nkcubeko
Kwezopolitiko kunye noLawulo loLuntu
Faculty zoNxibelelwano & uyilo
I-Faculty of Communication & Uyilo ubunjwe izikolo ezisithoba, ezifundisa zesidanga kunye / okanye onesidanga izidanga yezifundo eziphambili.
Izikolo Faculty zoNxibelelwano & uyilo
Perekrestke School of Media
School of ntatheli
School zoNxibelelwano Professional
iinkqubo ezongezelelweyo ophumelele zokufunda ezifumaneka obubhaliweyo eendaba, ubhalo lweendaba, imveliso eendaba, ukulondolozwa bokufota nolawulo ingqokelela nonxibelelwano yobungcali. Icandelo kwakhona kwizindlu Centre Rogers Communications, enika imeko ezintsha nezobuchule ukufunda kwaye baphande iinkalo ezahlukeneyo eendaba kunye noluntu.
YeFakhalthi weeNkonzo zoLuntu
Ryerson ka-Faculty of yeeNkonzo zoLuntu libonelela ngeeprogram multi-disciplinary kwimpilo, izifundo lwabantwana ekuqaleni, ubulungisa kwezentlalo kunye nophuhliso loluntu. Iinkqubo zesidanga ziquka:
Childhood Studies Early
EMsebenzini neMpilo yoLuntu
Urban noCwangciso Regional
iinkqubo Graduate ziquka:
Icandelo obandakanya iinkqubo zempilo nokhuseleko phantsi School of Occupational and Public Health. I-School of Occupational and Public Health (kwesingqengqelo) uthathwa ukuba abe yinkokeli eyaziwa-kakuhle ukwenzakala kunye nokuthintela izifo imfundo. Ryerson iYunivesithi sisikolo kuphela esifundisa inkqubo isidanga yempilo nokhuseleko lwasemsebenzini kweli phondo laseOntario. iinkqubo seMatriki impilo nokhuseleko inokugcwaliswa ngokusebenzisa Chang School aqhubeke nemfundo.
Icandelo ikwaquka Program Education lekisa (lodumo), ebibhiyozela iminyaka yayo 20 kwi 2013. Isayithi Ryerson lodumo yinxalenye nalo elide-ukubaleka eloluhlobo Canada (kunye nodade-sayithi Laurentian University kunye neDyunivesiti McMaster).
Ekugcineni kraca Ryerson ngayo imfundo omsebenzi-zijolise, abafundi iqabane kunye abacebisi ezahlukeneyo, neesuphavayiza, iingcali kunye neengcali ukuqinisekisa amava omsebenzi-afanelekileyo inikwa, ukongeza imiyalelo theoretical ngokuqhelekileyo kufundiswa kwigumbi lokufundela.
IYunivesithi kwakhona engumqhubi kwisikolo abalupheleyo omkhulu ogama kwi 2008 kuba Daphne Cockwell, unina donor Jack Cockwell impelesi abazikhethela ukusebenza amagqala ababuyela toSouth Afrika ukususela kweMfazwe Yehlabathi II.
YeFakhalthi zobuNjineli Science Architectural
The Ryerson Faculty of Engineering and Science Architectural (ngaphambili Faculty of Engineering, Architecture & Science) yenye lani zobunjineli likhulu Canada, kunye ngaphezu 4,000 abafundi abenza ababhalise 9 nezesidanga (19 xa kuquka iinketho / specializations), kwaye naphezu 500 abafundi ukuba baphumelele 15 inkosi kunye 5 iinkqubo isidanga sobugqirha. Ryerson ka-AAD ngo Computational Laboratory na udumbo ngenxa Performance High Computational Laboratory Virtual ngenxa Greater Toronto Area. The HPCVL yi interuniversity-high speed womnatha intelekelelo leyo isebenza Authority yenyani, ngokunika amandla intelekelelo ngamandla ezifunekayo isisombululo kwiingxaki ezinzima kwizifundo zobunjineli nezinye iinkalo.
I-Faculty of Engineering and Science Architectural unika Bachelor of Science Architectural and Bachelor of izidanga Engineering kwi macandelo alandelayo:
aerospace Engineering : Ndafunda Design umlambo, Zonke iintshukumo Design umlambo, Space Systems Design umlambo
Architecture : Architecture ukhetho, ukhetho Science Building, ukhetho noLawulo lweProjekthi
Injineri yezendlela : umlambo Environmental, Zesakhelo Engineering ukhetho, nokuThuthwa umlambo
Injineli yombane : Energy Systems ukhetho, Microsystems ukhetho, Multimedia Systems ukhetho, Robotics and Control Systems ukhetho
Imekhenikhali yenjineri : mechatronics ukhetho
I-Faculty of Engineering and Science Architectural libonelela ngeeprogram ophumelele:
Isebe lezeNzululwazi Architectural Ryerson yeYunivesithi ine kwisakhiwo esise 325 Street Church eziqulunqwe womzobi owaziwayo Canadian Ronald Thom(Ryersonian). Inikezela inkqubo aph ovunywe yiBhodi waseKhanada Certification Architectural kuzo zombini kwinqanaba isidanga (B.Arch.) kunye nenqanaba yenkosi (EyoKwindla.).
IZiko YobhaloQuery nobuNjineli yavulwa ngoSeptemba 2004 kwaye yimeko-of-the-art inzululwazi, iteknoloji, yaye iziko lophando nakumathafa phantse block isixeko siphela kwi dolophu Toronto. Isakhiwo labizwa George varį Engineering becomputing Centre ngoNovemba 2005. abaphandi Ryerson kwi zobunjineli nenzululwazi iinkalo ndayizuza Research Excellence Awards kangaka yeNkulumbuso (TOO), -sihlalo Canada Research, NSERC Industrial Research Chair. Inkqubo zobunjineli kwezonyango ayesiza Ryerson elishweni 2008 yinkqubo yokuqala hlobo Canada.
Icandelo nginginya Centre for Urban Energy. Ngawona silungelelaniswa-ngemali Isikhululo One, Ontario Power Authority and Toronto Isikhululo. Eli ziko ujolisa kuphando amandla kunye nemingeni yamandla ezidolophini.
ngoJuni 29, 2011, yunivesithi isaziso ukuba kwiYunivesithi Yeengwevu iphumeze Faculty of Science, edliwa ezintsha kwiYunivesithi Ryerson kwi nama 40 iminyaka. -Faculty of Science iya kwenziwa kumasebe okuqala amane – Chemistry & Biology, physics, Mathematics, neSayensi Computer.
Ryerson yeYunivesithi Faculty of Science inika Bachelor of Science (BSc) isidanga kwiindawo yemathematika isicelo, eziphilayo, inzululwazi kwezonyango, chemistry, ubunzululwazi bekhompyutha, izibalo zemali, kunye zemvelo zonyango. izifundo Graduate luqulathe lemimandla biomolecular, kwezonyango, izifundo bezibalo kunye zemathematika.
In 1852 zingundoqo kwikhampasi yangoku engundoqo, eyimbali St. james Square, Egerton Ryerson waliseka yoqeqesho lootitshala yokuqala Ontario ngayo, Toronto Eqhelekileyo School. Kwakhona wagcinwa iSebe leMfundo kunye Museum of Natural History and Arts Fine, leyo yaba Royal Ontario Museum. Lwelabhorathri yezolimo kwisiza kwakhokelela ekusekweni yamva Ontario College Agricultural kunye theUniversity of Guelph. St. James Square sayihamba nezinye iindlela ezahlukeneyo emfundo phambi eyindlu ugama ye umseki bayo boqobo.
Egerton Ryerson yaba njengotitshala elikhokelayo, sezopolitiko, kwaye umfundisi waseWisile. Waziwa ngokuba uyise kwinkqubo yesikolo sikarhulumente Ontario ngayo. Yena Kwakhona owaseka nkampani epapasha yokuqala eKhanada 1829, YaseWisile Book kwaye Publishing House, leyo labizwa Ryerson Cofa 1919 kwaye namhlanje yinxalenye McGraw-Hill Ryerson, ngumvakalisi waseKhanada iincwadi zemfundo kunye nobungcali, leyo nangoku uvelisa igama Egerton Ryerson ukuze imisebenzi yayo Canadian.
Inkqubela kwezenzululwazi neteknoloji bazisa kwi iMfazwe Yehlabathi II, kwaye waqhubeka mveliso waseKhanada, ngaphambili lomncedis Ukudakumba theGreat, kwadala imfuneko enkulu kakhulu abaqeqeshelwe abemi. Howard Hillen Kerr wanikwa ulawulo Ontario Uqeqesho Re-ukusekwa amaziko ezisithoba ukuze aphumeze oku. Umbono wakhe oko la maziko aza kuyenza ngokubanzi koko abanye ecebisa. In 1943, watyelela Massachusetts Institute of Technology (KUNYE) yaye weyiseka ukuba Canada lisa ezabo MIT wayo kwisithuba eminyaka ilikhulu. Apha endleleni, elo ziko Ndisenokusabela kwiimfuno ngoko yangoku uluntu. IPhondo xa ekugqibeleni yavunywa ingcamango namaziko yobugcisa, e 1946, oko kucetywa ukuba bafumana ezininzi. Kwathi kanti ke ukuba konke kodwa obeya kuba izikolo injongo eyodwa, ezifana yesikolo zemigodi. Kuphela Toronto iziko ngokutsha, leyo yaba Ryerson Institute of Technology in 1948, uza kuba campus multi-nkqubo, elizayo MIT Kerr ngayo Canada. Le mbono lubonakala Intetho Ryerson kunye walo ummiselo.
IZiko Training Toronto kunye nese-nokusekwa wadalwa kwi 1945 kwisiza owayesakuba Toronto Eqhelekileyo School e St James Square, lingqongwe Gerrard, icawe, Yonge kunye Gould. Isakhiwo Gothic-Romanesque kwayilwa nabayili Thomas Ridout and Frederick William Cumberland kwi 1852. Le ndawo sele isetyenziswe kwisibonelelo Royal waseKhanada Air Forcetraining ebudeni beMfazwe Yehlabathi II. Iziko yaba ekubanjiswene karhulumente Federal kunye wephondo ukuqeqesha ex-kwinkonzo nabafazi zokumakishwa-ukungena ebomini boluntu.
The Ryerson Institute of Technology yasekwa ngo 1948, ilifa abasebenzi kunye nezibonelelo ze Training naseToronto kunye nese-nokusekwa Institute. In 1966, yaba Ryerson Polytechnical Institute.
In 1971, mthetho yephondo yahlonyelwa ukuvumela Ryerson ukunika izidanga elamkelweyo zombini imithetho ngurhulumente wephondo nguMbutho Kwiiyunivesithi iiKholeji Canada (AUCC). ngaloo nyaka, Kwakhona waba lilungu leBhunga laseOntario weeYunivesithi (COU). In 1992, Ryerson waba esikolweni Toronto yesibini zobunjineli ukufumana isaphulelo kwi iiCanadian Engineering Accreditation Board (CEAB). Kunyaka olandelayo (1993), Ryerson ngokusesikweni waba kwiYunivesithi, ngokusebenzisa nguMthetho Ontario mthetho.
In 1993, Ryerson ifumene imvume inganika kwesidanga (inkosi kunye doctorates). Nyaka mnye, kwiBhodi leeRhuluneli walitshintsha igama iziko ukuba Ryerson Polytechnic University ukubonakalisa igxininisa kuphando ezinxulumene neenkqubo ezifumanisa nokwandiswa yayo ekubeni umnikelo eyunivesithi degrees zesidanga. Abafundi awuthimba ofisi zolawulo yeYunivesithi ngoMatshi 1997, ekhalazela kukukhula ngokuxhoma zokufunda.
ngoJuni 2001, isikolo izakuthatwa igama layo ngoku njengoko Ryerson University. namhlanje, Ryerson University inika iinkqubo aerospace, umchiza, yoluntu, mechanical, industrial, zombane, zobunjineli kwezonyango ne khomputha. The B.Eng Inkqubo zobunjineli kwezonyango yinkqubo zobunjineli kwezonyango lokuqala stand-alone zesidanga in Canada. Le yunivesithi naye zeeyunivesithi waseKhanada ezimbini kuphela ukuba angafunda iprogram kubunjineli aerospace elamkelweyo waseKhanada Engineering Accreditation Board (CEAB).
Uyafuna ukuxoxa University Ryerson ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
iifoto: Ryerson University ezisemthethweni kwiFacebook
ncomo Ryerson University
Dibanisa ukuxoxa University Ryerson.
University of Manitoba eyayiseWinnipeg